Dowlada Somalia Oo si Kulul U Beenisay In Alshabaab Joojisay Garoonka Kubada Muqdisho.(Sawirro) -
Dowlada Somalia Oo si Kulul U Beenisay In Alshabaab Joojisay Garoonka Kubada Muqdisho.(Sawirro)
Xukuumadda Soomaaliya ayaa si kulul u beenisay in Al-Shabaab ay joojiyeen dayactirkii ka socday Garoonka Kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho, kadib warbixinno laga soo xigtay shirkadda dhiseysa garoonka oo ay baahisay saxaafada gudaha qaarkood.
Ra’iisal Wasaare kuxigeenka xukuumadda Somalia Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo ay la socdeen Wasiirka Dhalinyarada & Cayaaraha Khadiijo Maxamed Diiriye, Wasiirka Warfaafinta Maareeye & Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa saxaafadda kula hadlay gudaha Garoonka Stadium Muqdisho, waxayna been abuur ku tilmaameen inay joogsatay shaqadii dayactirka ee Garoonka ka socotay.
Wasiirka Wasaaradda Warfaanta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in howshii dhismaha & Dayactirka ee Stadium Muqdisho ay si caadi ah u socdaan, isla markaana aysan jirin wararka sheegaya in Alshabaab joojisay dhismaha, isagoo caddeeyay inay baaritaan ku sameyn doonaan shirkadda heysata qandaraaska dhismaha Garoonka.
Wasiir Maareeye ayaa sheegay in Al-shabaab aysan awood u laheyn joojinta dhismaha garoonka, isagoo uga digay Warbaahinta gaarka loo leeyahay wararka been abuurka ah.
Mas’uuliyiinta ayaa kormeer ku sameeyay qeybaha Garoonka weyn ee Stadio Muqdisho iyo Tuulada Ciyaaraha. Waxaana la arkayey shaqaale kala duwan oo halkaas ka wada howlaha lagu dayactirayo garoonka.
Faysal Cali Waraabe Oo Cimaamaday Odayaal Dhex-dhexaadiya Kornaylada Biixi Iyo Caare.